Siyaasi iswiidhish ah oo lagu qabtay Itoobiya - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Saldhigga wasaaradda arrimaha dibedda. Sawirle: Jonas Ekströmer
Siyaasi iswiidhish ah oo lagu qabtay Itoobiya
La daabacay måndag 15 juli 2013 kl 09.49
Nin siyaasi ah Nin siyaasi ah oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Itoobiya ayaa maalihii la soo dhaafay lagu qabtay oo si xun loogu garaacay dhulka Ogaadeenya oo ay isaga iyo carruurtiisu booqasho ku joogeen. Ninkaan oo waqtigiisa firaaqada siyaasi ka ah magaqalada Göteborg, ayaa lagu qabtay degaankii horay loogu qaban jirey weriyayaasha Martin Schibbye iyo Johan Persson. Walaalkiis oo wakaaladda TT la hadlay wuxuu sheegay in carruurtiisa hortooda lagu jirdilay.
Dhanka kale gabadha wasaaradda arrimaha dibedda u qaabbilsan saxaafadda oo lagu magacaabo Sara Brandt-Hansen ayaa idaacadda Ekot u sheegtay in wasaaradda arrimaha dibeddu ay la socoto in muwaadin iswiidhish ah lagu qabtay degaankaas laakiin hadda la siidaayey. Waxay kaloo sheegtay in safaaradda Iswiidhen u fadhida Addis Abeba ay la socoto xaalkiisa.
Ninkaan oo muddo 30 sano ah ku noolaa Iswiidhen wuxuu haystaa dhalashada iswiidhishka. Isaga iyo sagaal carruur ah oo dhammaantood Iswiidhen ku dhashay ayaa markii ugu horreysey booqasho ku aaday Itoobiya, sida walaalkiis u sheegay wakaaladda TT.
Ninkaani wuxuu horay u sheegtay in uu ka soo jeedo gobolka Ogaadeenya oo ku dheggan xadka Soomaaliya. Dhulkaan waxaa khilaaf ka taagnaa laga soo bilaabo qarnigii 18aad. Sannadkii 1977 ayey ahayd markii ciidamada Soomaaliya qabsadeen gobolkaas, laakiin sannadkii ku xigay ayey ciidamadii Itoobiya soo saareen ciidankii Soomaaliya. Dagaalkaasina wuxuu sababay in dad tiradoodu ku dhowdahay laba milyan ay naftooda u la barakacaan.
Waxaa sanooyinkii dambe halkaas ka taagnaa khilaaf siyaasadeed kadib markii ay jabhadda xoreynta Ogaadeenya oo loo soo gaabiyo ONLF dagaal ku qaadday dowladda dhexe sannadkii 1984.
– Wasaaradda arrimaha dibeddu waxay dadka iswiidhishka ah ku la talineysaa in aysan u safrin Ogaadeenya, ayey Sara Brandt-Hansen u sheegay Ekot.